Wantoota Fakkaasa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu
Miseensota Fakkasaa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu
LibreOffice keessaa miseensota fakkasa barruu, wardiiwwan fi galmeewwan dhiyeessaa gidduu garagalchuun ni danda'ama.
Wanta yookiin wantoota fakkasichaa fili.
Wanticha fakkaasa gara gabatee muraatti garagalchi, fakkeenyaaf, AjajaCtrl+C fayyadamuudhaan.
Gara galmicha birootti jijjiiriitii qaree bakka wanti fakkasa saagamuuf qophaa'e kaa'i.
Wanticha fakkasa saagi, fakkeenyaaf, AjajaCtrl+V fayyadamuudhaan.
Garakeessa galmee barruutti saaguu
Wanti fakkasa saagame keewwaticha ammaatti korkoddaa'eera. Wanticha filachuunii fi sajooKorkoddii Jijjiiri kamshaa Wanta-OLE irraa yookiin kamshicha Goodayyaa cuqaasuun korkodicha jijjiruu ni dandeessa. Kuni baafata tasa mul'atu bakka gosa korkoddii filachuu dandeessu bana.
Garakeessa wardii saaguu.
Wanti fakkasaa saagame man'eecha ammaatti korkoddaa'a. Korkoddii man'ee fi fuula gidduu jiru wanticha filachuunii fi Korkoddii Jijjiiri sajoo cuqaasuun jijjiiruu ni dandeessa.
Wardiiwwan Irraa Deetaa Saaguu
Deetaa Galmeewwan Barruu Irraa Saaguu
Title is: Wantoota Fakkaasa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu